Funda iNdaba yeKrisimesi yeNkcazelo yeKrimesi yokuzalwa kukaYesu
Ukukhupha iNdaba yoKuzalwa kukaYesu Kristu njengoko ichazwe eBhayibhileni
Inyathelo phakathi kwekhasi leKrisimesi yeBhayibhile uze uxoxe ngeziganeko ezijikeleze ukuzalwa kukaYesu Kristu . Le nguqulo ichazwe kwiincwadi zikaMathewu noLuka .
Kuphi Ukufumana iNqaku leKrisimasi kwiBhayibhile yakho
Mateyu 1: 18-25, 2: 1-12; Luka 1: 26-38, 2: 1-20.
UMariya , osemncinci ohlala kwidolophana yaseNazarete, wayezimisele ukutshata noYosefu , umbazi wamaYuda. Ngenye imini uThixo wathuma ingelosi ukuba ibone uMariya.
Ingelosi yamxelela uMariya ukuba uza kuba nomntwana ngamandla kaMoya oyiNgcwele . Wayeza kuzala lo mntwana aze amthiye nguYesu .
Ekuqaleni, uMariya wayeyika kwaye wayekhathazeka ngamazwi angelosi. Ukuba yintombi, uMariya wabuza ingelosi, "Oku kwenzeka ntoni?"
Ingelosi yachaza ukuba umntwana uya kuba nguNyana kaThixo kwaye akukho nto ayinakwenzeka kuThixo. Wadumala kwaye wesaba, uMariya wakholwa ingelosi yeNkosi waza wavuya kuThixo uMsindisi wakhe.
Ngokuqinisekileyo uMariya wabonakala ngokumangalisa ngamazwi kaIsaya 7:14 athi:
Ngako oko iNkosi iya kuninika isibonakaliso: Intombi iya kuba nomntwana kwaye iya kubeletha unyana, ize imthiye nguEmanueli. (NIV)
Ngoko, ngoxa uMariya wayesenomdla kuYosefu, wenza ummangaliso ngokukhulelwa njengokuba isithunywa sathi. Xa uMariya etshela uYosefu ukuba ukhulelwe, wayenokuziva ehlazekile. Wayeyazi ukuba umntwana wayengowakhe, kwaye ukungathembeki kukaMariya kwakubangele inkani enkulu.
UYosefu wayenelungelo lokuqhawula uMariya, kwaye phantsi komthetho wamaYuda, unokubulawa ngokukhandwa ngamatye.
Nangona uYosefu waphendule okokuqala ukuba aphule ukubandakanyeka, into efanelekileyo kumntu olilungisa ukuba ayenze, wamphatha uMariya ngobubele obukhulu. Wayengafuni ukumenza ahlazeke ngakumbi kwaye wagqiba ekubeni enze ngokuthula.
Kodwa uThixo wathumela ingelosi kuYosefu ephupheni ukuqinisekisa inkali kaMariya aze amqinisekise ukuba umtshato wakhe wayekuthanda kukaThixo. Ingelosi yachaza ukuba umntwana wakhulelwa nguMoya oyiNgcwele, ukuba igama lakhe liza kuba nguYesu, nokuba unguMesiya.
Xa uYosefu evuka ephupheni lakhe, wamthobela uThixo ngokuzithandela waza wamthabatha uMariya ukuba abe ngumkakhe nxamnye nohlazo lwabantu ayeza kuthatha. Isidima sikaYosefu sisinye isizathu sokuba uThixo amkhethe ukuba abe nguyise kaMesiya emhlabeni.
Ngelo xesha, uKesare uAgasto wachaza ukuba kuya kubanjwa ubalo . Wonke umntu ehlabathini lamaRoma kwafuneka abuyele kwidolophu yakubo ukuba abhalise. UYosefu, owayengumgca kaDavide , wayefuneka ukuba aye eBhetelehem ukuba abhalise noMariya.
Ngethuba eBhetelehem, uMariya wazala uYesu. Ngenxa yobalo, indlu yokulala yayininzi, kwaye uMariya wazala ngesigxina. Wambesa umntwana ngeengubo waza wambeka emkhombeni.
Abaalusi banqula uMsindisi
Kwintsimi esondeleyo , ingelosi yeNkosi yabonakala kubelusi ababeye bemfutshane imihlambi yeegusha. Ingelosi yamemezela ukuba uMsindisi wehlabathi wayezalelwe edolobheni likaDavid. Ngokukhawuleza kwindoda enkulu yasezulwini yavela kunye nengelosi yaqalisa ukucula iingoma zikaThixo.
Njengoko izithunywa zezulu zahamba, abelusi bathi omnye komnye, "Masihambe siye eBhetelehem! Masibone uKristu-umntwana!"
Bakhawuleza baya kwidolophana bafumana uMariya, uYosefu, nosana. Abalusi babelana nawo wonke umntu oko kwathethwa ingelosi ngoMesiya oza kutsalwa. Emva koko bahamba endleleni yabo badumisa, bakhazimulisa uThixo.
Kodwa uMariya wahlala ethule, wawaxabisa amazwi abo entliziyweni yakhe.
Amagi azisa izipho
Ukuzalwa kukaYesu kwenzeka xa uHerode wayeyinkosi yakwaYuda . Ngeli xesha, amadoda ahlakaniphile (Magi) avela empuma wabona inkwenkwezi enkulu. Bawulandela, beyazi ukuba inkwenkwezi ibonisa ukuzalwa kookumkani bamaYuda.
Amadoda alumkileyo afika kubalawuli bamaYuda eJerusalem waza wabuza apho uKristu wayeza kuzalwa khona. Abalawuli bathi, "EBhetelehem yaseJudiya," ngokubhekiselele kuMika 5: 2. UHerode wadibana ngasese kunye nabaMagi waza wabacela ukuba babuyele emva kokufumana umntwana.
UHerode wathi kubaMagi ukuba wayefuna ukunqula umntwana. Kodwa uHerode wayemcebise ukubulala umntwana.
Amadoda alumkileyo aqhubeka elandela inkwenkwezi efuna ukumkani ozalwayo. Bamfumana uYesu nonina eBhetelehem.
Amagi aqubuda aze amkhonze, anike ubuncwane begolide, intlaka yempepho kunye nemure . Xa behamba, abazange babuyele kuHerode. Baye balumkisa ngephupha lakhe icebo lokutshabalalisa umntwana.
Amanqaku anomdla kwiNdaba
Ngelo xesha amadoda azilumko atyelela uMariya noYesu, umntwana wayeneminyaka emibini ubudala.
UYesu wayebizwa ngokuba nguImanuweli (oko kuthetha ukuba "uThixo unathi"), njengoko kwakuchazwe ngumprofeti uIsaya. UThixo enyameni wahlala nabantu. Kanye njengoko uMoya oyiNgcwele wenza oku kwenzeka kwiKrismesi ibali, uMoya ofanayo wenza ukuba uYesu Kristu abe namhlanje namhlanje ebomini babo bonke abakholwayo. Kungenzeka ukuba uIsaya wayengayiqondi intsingiselo epheleleyo kunye neyona nto ifikelela kuyo.
Ingelosi yeKrismesi, uGabriyeli , ayibonakali kuphela kuZekariya noMariya kodwa kuDaniyeli umprofeti ngaphezu kweminyaka engama-500 ngaphambi kweKrisimesi.
UMariya wayengumntu ongenakwenzeka ukuba ahlonishwe ngendima yomama kuMsindisi. Wayengumfana omncinci, ohluphekileyo. Ngomhla wakhe, ezi mpawu zazimfanelekanga njengomntu uThixo azokusebenzisa kuyo nayiphi na injongo ebalulekileyo. NjengoMariya, unokuziva ungaphantsi kokufanelekela ukukhonza uThixo. Kodwa uMariya wathemba uThixo waza wamthobela ngokuthobeka. Musa ukumisela imida kuThixo kunye nento afuna ukuyenza ngayo ngobomi bakho. Uya kusebenzisa nawe, ukuba uthembela kuye.
Xa abelusi bemshiya uMariya, bacinga ngokuzenzekelayo ngamazwi abo, bawaxabise baze baqiqa rhoqo entliziyweni yakhe.
Kumelwe ukuba yayingekho ngaphaya kwamandla akhe okuqonda, ukulala eengalo zakhe-umntwana wakhe osana olusanda kuzalwa - nguMsindisi wehlabathi.
Xa uThixo uthetha nawe kwaye ubonisa intando yakhe, ngaba uyayigcisa amazwi akhe ngokukhawuleza, njengoMariya, kwaye ucinga ngazo ngokuqhelekileyo entliziyweni yakho?
Iintlobo ezine Zothando eBhayibhileni
I-ATV Izixhobo zoKhuseleko
Imfazwe Yehlabathi II: iMfazwe ye-Bulge
Indlela yokudibanisa "Ophezulu" (kwiBark)
I-Arrowheads kunye namanye Amaphuzu: IiNtsomi kunye neNcinci eziNcinci
Izibambiso zesiLwimi zesiJamani - iSprechen - Ukuthetha
Uhlobo oluyingqayizivele lwePaintoror Paint
I-Punjabble Game, Inkcazo, iiNzuzo kunye noThengi: Ukuhlaziywa